Yekupedzisira Nhungamiro Yekushandisa Mari Yekutamba Mitambo Pamhepo - TMC App
Iwe unogona kunge uchitenda kuti kuita mari chaiyo uchitamba mitambo yemavhidhiyo kwakaoma kana iwe wakafanana nevanhu vazhinji.
Kune kunyange mamwe maapplication anokugonesa kuita mari uchitamba mitambo yemavhidhiyo pafoni yako.
Iwe unongoda kuti unzwisise kuti mikana iripi.
Muchinyorwa ichi chipfupi, tichakuzivisa iwe zviri pamutemo nzira dzaunogona kuita mari kuita mitambo yemavhidhiyo online.
Chii chinonzi online video game?
Tisati tatanga, ngatitangei kutaura nezve online vhidhiyo mutambo wemitambo chaizvo.
Mitambo yemavhidhiyo yepamhepo ndipo apo vatambi vaviri kana vanopfuura vanotaurirana kuburikidza nepuratifomu yepamhepo senge saiti, nharembozha app, kana komputa mutambo wemutambo sePlaystation 2.
Inogona zvakare kuve mitambo yemavhidhiyo yepamhepo yaunoshandisa app kana komputa system inokubhadhara kuti utambe mitambo yemavhidhiyo pamhepo usingade kubva pamba pako.
Kugadzira mari yekutamba mitambo yemavhidhiyo pamhepo ndiyo nzira inonyanya kushanda.
Zvinogoneka zvakanyanya nekuda kwekuti Webhu yakatoita zvinhu zvakawanda zvinogoneka izvo zvingadai zvakawoma kana kutooma kare.
Kana iwe uchida kuita mari chaiyo kugadzira mitambo yemavhidhiyo pafoni yako, izvi zvinogoneka sezvo paine mikana yakawanda senge yandava kuda kukuzivisa.
10 Nzira dzaunogona Kuita Yechokwadi Cash Kuita Mitambo Online
Kuita mari uchitamba mitambo yemavhidhiyo hakusi nyore sezvazvinoita, asi zvinogoneka.
Hedzino gumi nzira dzaunogona kupedzisira wave mutambi wepamhepo kana kutanga kuita mari yekutamba:
1. Mabhena uye youtubers
Kana iwe usingazive nezve izwi iri, "YouTuber" munhu anozvigadzira mavhidhiyo ekutamba mashere nemitambo yemavhidhiyo paYouTube kuti vamwe vaone.
Iwe unogona zvakare kuwana mari nekufambisa yako vhidhiyo mutambo unogara panzvimbo dzakaita seTwitch, izvo zviri nani zvakanyanya sezvo iwe uchisangana nevateereri vako zvakananga uye unogona kuita kwavari nekukurumidza.
Kuti ushande, iwe unozofanirwa kuve nekutevera kwakakura pamatanho ako kuti iwe ugone kuita mari yekushambadzira nekuburitsa kushambadzira muvhidhiyo yese.
Kune akati wandei emhando dzemitambo yemavhidhiyo yakakurumbira kuyerera uye kutamba, zvisinei MMOs (Enormously Multiplayer Online Mitambo) yakanyanya kunaka kana uchida kusimudzira fanbase.
Kune anowanzo mazana kana asingaverengeki evatambi vepamhepo panguva, saka iwe une tarisiro yekuita mahombe emari ekushambadzira nekusaina neTwitch inozivikanwa. terevhizheni kana YouTube mavhidhiyo ekutamba nharaunda.
2. eSports Makwikwi
Kupedzisira kuve eSport ndeimwe yeakanakisa dzimwe nzira kana iwe uchida kuita mari uchitamba mitambo yemavhidhiyo!
Kune akatiwandei emhando yemitambo yemavhidhiyo epamhepo inozivikanwa kune vakwikwidzi veSports, zvisinei, pamhepo pavhidhiyo mitambo yemavhidhiyo inonyanya kukosha kana iwe uchida kupedzisira wave eSport gamer sezvo ivo vachitarisa zvakanyanya kugona uye nzira.
3. Tamba Mitambo Yezvibatsiro
Imwe nzira yekugadzira mari ndeyekuwana mabhenefiti ekutamba mitambo yemavhidhiyo!
Pakati penzvimbo dzakanakisa dzekuita mari yekutamba mitambo yemavhidhiyo ine Swagbucks.
Saiti yakakurumbira inoita kuti iwe uwane mari nekutamba mitambo yemavhidhiyo online, kunakidzwa nemavhidhiyo, kutenga online, uye kupedza mabasa madiki.
Ivo vanotova nemakadhi aripo aunogona kudzikinura kuAmazon aripo kadhi makodhi kana PayPal mari!
Chimwe chinhu chinotonhorera cheSwagbucks ndechekuti vanoshandisa nharembozha yeIOS uye Android saka unogona kubhadharwa kuti uende kunotenga kana kutamba mitambo yemavhidhiyo paunenge uchienda.
4. Tora Chikamu MuKupa Kwemahara uye Sweepstakes
Izvi zvakanyanya kufananidzwa ne "play for benefits" maitiro, asi pano iwe unonyatso kuwana mari yekutamba mitambo yemavhidhiyo online!
Saiti PrizeRebel.com muenzaniso wakanaka kwazvo weizvi sezvo vachikupa mapoinzi ekutamba emahara mitambo yemavhidhiyo uye kupedza mabasa madiki, ayo aunogona kuchinjana mari chaiyo.
PrizeRebel iri pakati penzvimbo dzakanakisa kwaunogona kunyatsowana mari nekutamba mutambo wekombuta (kana kusefa pawebhu nekuona mavhidhiyo), zvisinei kune dzimwe nzira dzakafanana sezvidzidzo zvepamhepo.
5. Tamba Mitambo yeBitcoin
Zvino izvi zvakakunakira iwe, kana iwe uchinzwisisa kuti Bitcoin chii!
Pakati penzira dzakanakisa dzekuita mari kuita mitambo yemavhidhiyo pamhepo pasina kana kusiya imba yako kushandisa BitCoin mari.
Mari iyi yakatopedzisira yave kufarirwa uye ine mari yakawanda yakakosha.
Pakati penzvimbo dzakanakisa dzekuita mari uchitamba mitambo yemavhidhiyo online nekugadzira BitCoin mari ndeye FreeBitco.in!
Saiti ino inokubvumidza kuti utambe mitambo yemavhidhiyo emahara uye kutora zvidzidzo kuti ugadzire mari yavo chaiyo, iyo yaunogona kuchinjana mari chaiyo.
6. Gadzira Mari Inotamba Mitambo Yakasununguka
Iwe unogona zvakare kuita mari uchitamba mitambo yemavhidhiyo akajairwa kana uri mutambi ane ruzivo.
Mitambo yemavhidhiyo yepamhepo yakajairwa imhando dzemutambo wekombuta inoda kugona kushoma uye haiwanzo kubheja vanokwikwidza kana esports.
Ivo vanopa kubhadhara-ku-kutamba sarudzo saka haufanirwe kuisa nguva yakawanda mazviri kuitira kuti uite mari chaiyo.
Pakati penzvimbo dzakanakisa dzekuita mari uchitamba mitambo yemavhidhiyo yakajairwa ndeye Skillz.
Skillz inoitisa makwikwi evanhu vane marudzi ese ematanho ekugona, saka iwe unogona kuita mari nekutamba makadhi evhidhiyo mitambo, arcade-maitiro evhidhiyo mitambo, trivia bvunzo, nezvimwe!
7. Gadzira Wako Wega-Inoenderana Saiti kana Blog Saiti
Pakati penzira dzinonyanya kufarirwa kuita mari chaiyo yekuita mitambo yemavhidhiyo pamhepo ndeyekuvaka yako wega-ine chekuita nemutambo saiti kana bhurogu saiti kwaunogona kuongorora uye kupa zano zvinhu zvaunofarira.
Yako saiti kana bhurogu saiti inokwevera kutariswa kwakawanda kubva kune vangave varipo vateveri kana vangangoita-vatsva vatambi kana iwe parizvino uchinyatsoziva mumwe mutambo wevhidhiyo.
Mikana yacho haina magumo ekuti iwe ungavaka sei yako blog saiti uye/kana saiti yakatenderedza mumwe mutambo wevhidhiyo kana chikamu chemitambo yemavhidhiyo kana uri mushambadzi wepamhepo.
, kana iwe uchida kuita mari kubva kune saiti tarisa yedu yakazara pfupi chinyorwa chinokubatsira kuti utange nekubloga.
8. Gadzira Income Kutamba Mitambo Online neKushanda seMutambi weHire
Iyi ndiyo nzira yakanakisa yekuita mari uchitamba mitambo yemavhidhiyo kana iwe uchinyanya kutamba mitambo yemavhidhiyo.
Kune vanhu vazhinji vanobhadhara vamwe vatambi kuti vatambe mitambo yemavhidhiyo online kwavari!
Sezvo vangave vasina nguva kana kuti vasingafarire kuzvitamba, vanozviita.
Nzira yekutanga kuwana vatambi vekubhejera iwe ndeye kutarisa mawebhusaiti akaita seFiverr.com, kwaunogona kuwana chero chinhu chakapihwa $5.
Iwe unongoda kushambadza zvauri kuda kuita uye mushure meizvozvo mafreelancers vanopindura nemitengo yavo yakanakisa.
Nzira yechipiri yekutsvaga vatambi vekuhaya ndeye kushandisa maforamu epamhepo ane chekuita nemitambo yemavhidhiyo.
Chiri kutyisa ndechekuti vatambi varikuda kuita imwe mari vanogona kupindura nemari yavo.
9. Ipa Your Game-Related Creations Online nokuda Real Cash
Nekuda kwekuti kune vanhu vakawanda kunze uko vakagadzirira kutenga, imwe yedzakanakisa nzira dzekuita mari uchitamba mitambo yemavhidhiyo pamhepo ndeyekupa budiriro yako!
Chero bedzi ivo vachiri vekutanga, vatambi vanozofarira izvo zvaunoda kutaura uye vanonakidzwa nekukupa mari yavo.
Mumwe muenzaniso ndeyevasingaverengeki vanyori venhema vanyori kunze uko vanoita mari nekukurukura zvavanoda zvemitambo yemavhidhiyo uye zvirongwa zveTEVISION.
Mumwe muenzaniso ndewevanhu vazhinji vanonyora madhairekitori emitambo yemavhidhiyo yepamhepo, ndosaka mawebhusaiti akaita seGameFAQs aripo.
Unogona kugovera zvinhu zvako pachako pamwe chete nekuita mari kubva kwavari!
10. Gadzira Mari Yekutamba Mitambo Pamhepo neKuronga Makwikwi
Pakati pedzimwe nzira dzichangoburwa dzekuwana mari nekutamba mitambo yemavhidhiyo kuitisa makwikwi uko vanhu vanogona kuhwina mibairo yemahara.
Kune akawanda mawebhusaiti anopa mari kune wese anotora chikamu mumakwikwi avo.
Sezvo parizvino vari kupa mibairo, haufanirwe kuhwina chero chinhu iwe pachako!
Zvese zvaunoda kuti uite kugadzira account pane aya masaiti uye mushure mezvo buritsa nezve makwikwi ako.
Inogona kunge isiri iyo inokurumidza nzira yekuita mari, kana iwe ukaisa nguva yakakwana uye kushanda nesimba uye nekuona maitiro ekutamba mitambo yemavhidhiyo pamhepo zvakakodzera, ipapo unozogona kurarama nekutamba mitambo yemavhidhiyo.